मेडिसिटी अस्पतालकाे यस्ताे लापरवाही, पूर्व सांसद गायत्री धर्नामा - Everest Dainik - News from Nepal
मेडिसिटी अस्पतालकाे यस्ताे लापरवाही, पूर्व सांसद गायत्री धर्नामा
काठमाडौ, २३ चैत : गैरअवासिक नेपाली संघ (एनआरएन) का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो नेतृत्वको भैसेपाटीस्थित नेपाल मेडिसिटी अस्पतालले चरम लापरवाही गरेको भन्दै पूर्व सांसद गायत्री शाह र उनका आफन्तहरुले धर्ना दिएका छन् । देशकै सबैभन्दा सुविधा सम्पन्न भनेर प्रचार गरिएको अनि महंगो अस्पताल मेडिसिटीमा पूर्व सांसद शाहको कोखबाट डाउन सिन्ड्रम भएको बच्चा जन्मिए पछि धर्ना बस्ने बातावरण सिर्जना भएको हो । अस्पताल र उपचारमा संलग्न चिकित्सकको लापरवाहीका कारण डाउन सिन्ड्रम भएको बच्चा जन्मिएको पुर्व साँसद शाहको आरोप छ । ‘अस्पतालले आमा र बच्चाको स्वास्थ्यमा खेलबाड गरेकाले यस्तो बच्चा जन्मिन पुगको हो, अब यो बच्चाको जिम्मा अस्पतालले नै लिनुपर्छ भन्दै धर्ना बसीरहेका हौं’,पहिलो संविधानसभामा सबैभन्दा कान्छी सभासद्का रुपमा चर्चित शाहले भनिन् ।
शाहले फागुन २८ गते मेडिसिटीमा क्रिटिकल डाउन सिन्ड्रम भएको बच्चा जन्माएकी थिइन । मेडिसिटीकी वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा.निरासिंह श्रेष्ठको असावधानीका कारण डाउन सिन्ड्रम भएको बच्चा जन्मिएको शाह र उनका आफन्तको आरोप छ । गर्भ बसेपछि नै शाहको स्वास्थ्य जाँचमा डा. श्रेष्ठ संलग्न थिइन ।
डाउन सिन्ड्रम भएको बच्चाको शारिरीक अवस्था अरु समान्य बच्चा जस्तो हुदैन । शरीरका अंगहरुको स्वभाविक विकास नहुने भएकाले यस्तो बच्चाले समान्य बच्चा जस्तै काम गर्न सक्दैन । बेला बेला उपचारका लागि अस्पताल लगिरहनुपर्छ । चिकित्सकहरुका अनुसार क्रिटिकल डाउन सिन्ड्रम भनेको बिकलाङ्ग जस्तै हो । न उमेर अनुसारको बृद्घिको विकास हुन्छ न उचाई र तौल नै । गर्भवती जाँचका क्रममा पटक पटक भिडियो एक्सरे गरेर मोटो रकम असुले पनि गर्भभित्र रहेको बच्चामा डाउन सिन्ड्रम भएको प्रति कुनै हेक्का नै नराखी आफुहरुलाई गुमराहमा राखेर पैसा मात्र असुलेको धर्ना बसेकाहरुको आरोप छ । ‘बच्चा जन्मेपछि अब्जरभेसनमा राख्नुपर्छ भन्दै सघन उपचार कक्षमा राखियो । पछि मात्र हामीलाई बच्चाको अवस्थाबारे जानकारी दिइयो’, गायत्रीका पति राजेश शाहले भने । पटक पटक गर्भवती जाँच र दुई तिन पटक भिडियो एक्सरे गर्दासमेत डा. श्रेष्ठले ‘गर्भमा रहेको बच्चा नर्मल छ’ भनेर हामीलाई जानकारी दिनु चरम लापरवाही भएको राजेशको दाबी छ ।
‘भिडियो एक्सरेबाट थाहा हुने कुरामा डाक्टरले लापरवाही गर्दा क्रिटिकल डाउन सिन्ड्रोम भएको बच्चा जन्मियो । अब्जरभेजन भन्दै एनआईसियूमा राखे । अहिले डिस्चार्ज गरेर लैजाउ भन्दै छन’, राजेशले भने, ‘यस्तो बिकलांग बच्चाको लालन पोषण कसरी गर्ने ? यसको हेरचाह र उपचारको जिम्मा अस्पतालले लिनु पर्छ ।’ अस्पतालले गल्ती स्विकार गरेर बच्चाको हेरचाह र उपचारको जिम्मा नलिएसम्म बच्चा डिस्चार्ज गरेर नलैजाने र धर्ना जारी राख्ने गायत्रीले बताइन् । डा.श्रेष्ठ भने डाउन सिन्ड्रम भिडियो एक्सरेबाट थाहा नहुने बताइन । डाउन सिन्ड्रमको रुटिन टेष्ट गर्ने प्रोकोटल र सुविधा दुबै नेपालमा नभएको डा. श्रेष्ठले बताइन । उनले भनिन, ‘ ३५ वर्ष उमेर पार गरेका महिलालाई शंका लागे यसको टेष्ट गराउनु पर्ने हुन्छ । तर गायत्री शाहको उमेर ३४ बर्ष भएकाले डाउन सिन्ड्रमको परिक्षण गर्न आवश्यक ठानिएन । ’ यसको टेष्ट एकदमै महंगो भएकाले पनि सितिमिति यो टेष्ट नगराउने गरिएको डा. श्रेष्ठले बताइन । दुर्भाग्यवस डाउन सिन्ड्रम भएको बच्चा जन्मेकोमा आफुलाई पनि दुख लागेको डा. श्रेष्ठले बताइन ।
स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ समाज (नेसोग) का उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा. गणेश दंगालले भिडियो एक्सरेबाट डाउन सिन्ड्रम थाहा नहुने बताउदै यो प्रविधि नेपाल नभएको र महंगो पर्ने भएकाले अपवाद बाहेक यसको जाँच गराउने चलन नभएको दाबी गरे । उनले भने, ‘ चिकित्सकलाई शंका लाग्यो वा कसैले गरिदिनुस भनेर अनुरोध गर्यो भने मात्र टेष्टका लागि विदेश पठाउछौ । नत्र यो टेष्ट महंगो भएकाले गरिदैन । ’ डाउन सिन्ड्रम टेष्ट गर्न ५० हजार भन्दा बढी लाग्ने डा. दंगालले बताए । नेपाल मेडिसिटी हस्पिटलका महाप्रवन्धक विजय रिमालले अस्पतालले कुनै गल्ती नगरेको दाबी गर्दै अस्पतालको गल्ती देखिए पिडित पक्षलाई सक्दो सहयोग गर्ने बताए । उनले भने, ‘उपचार प्राविधिक कुरा हो । सबै कुरा मलाई थाहा छैन । अस्पतालको गल्ति देखिएमा हामी सजाय भोग्न तयार छौ । ’
मेडिसिटीका अध्यक्ष उपेन्द्र महतोले ‘डाक्टरबाट गल्ती भएको’भन्दै समस्यालाई चिकित्सककै गल्तीमा सिमित गरिहेका छन् । महतोले क्षतिपूर्ति स्वरुप रकम दिने मनसाय व्यक्त गरे पनि आफूहरुले नमानेको शाहले बताए । ‘हामीले पैसाको लागि धर्ना दिएका होइनौ । उत्कृष्ट अस्पताल भनेर मोटो रकम असुल्ने अस्पतालका चिकित्सकको लापरवाहीले बिकलाङ्ग बच्चा जन्मिदा त्यसको जिम्मा अस्पतालले लिनुपर्छ भन्ने मागहो, यसमा सम्झौता हुदैन’, राजेशले भने । लापरवाहीको आरोप लागेकी डा. श्रेष्ठ मेडिसिटीकी पूर्णकालिन चिकित्सक हुन । उनले मध्य वानेश्वरमा नेपाल हेल्थ क्लिनिक सञ्चालन गर्दै आएकी थिइन । गायत्रीले सुरुमा उनकै क्लिनिकमा स्वास्थ्य जाँच गराएकी थिइन् । डा. श्रेष्ठकै सल्लाहमा गायत्री सुत्केरी हुन मेडिसिटीमा भर्ना हुन पुगेकी थिइन् ।